Ndị njem ntụrụndụ US na-anọ n'ụlọ ka ikpe COVID-19 na-arị elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Ndị njem ntụrụndụ US na-anọ n'ụlọ ka ikpe COVID-19 na-arị elu
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ebe ikpe COVID-19 na-arị elu na nchegbu njem na-arị elu ka anyị na-abanye n'oge ọdịda na ọnwa oyi, ụlọ ọrụ ụlọ nkwari akụ ahụ nọ n'ọnọdụ dị mkpa.
69% nke ndị njem ntụrụndụ US nwere ike ọ gaghị eme njem ole na ole.
42% nke ndị njem ntụrụndụ US nwere ike ịkagbu njem ndị dị adị.
55% nke ndị njem ntụrụndụ US nwere ike yigharịrị njem ndị dị ugbu a.
Ndị njem ntụrụndụ US na-eme atụmatụ ịhazigharịa atụmatụ njem n'etiti nsogbu COVID-19 na-ebili, na 69% na-eme atụmatụ ime njem ole na ole, 55% na-eme atụmatụ yigharị atụmatụ njem dị ugbu a, na 42% nwere ike ịkagbu atụmatụ ndị dị ugbu a na-enweghị ịhazi oge. nyocha mba mere n'aha ndị Hotellọ oriri na ọ Hotelụ Americanụ American & Lodging Association (AHLA). Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ atọ n'ime anọ (72%) nwere ike ịga naanị ebe dị anya ịnya ụgbọ ala.
Ọ bụ ezie na njem ntụrụndụ n'akụkọ ihe mere eme na -amalite ịdalata mgbe ụbọchị ọrụ, ọ ka dị mkpa n'afọ niile. Nnyocha ọhụrụ ahụ na -egosipụta mmetụta ọjọọ na -aga n'ihu na -efe efe na njem ma na -egosipụta mkpa ọ dị maka enyemaka gọọmentị etiti ezubere iche, dị ka Actlọ Ọrụ Chebe Hotel.
Ihe karịrị otu n'ime ọrụ ụlọ nkwari akụ ise furu efu n'oge ọrịa a - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 500,000 - agaghị alaghachi na njedebe nke afọ a. Maka mmadụ iri ọ bụla na-arụ ọrụ ozugbo na ụlọ nkwari akụ, ụlọ oriri na nkwari akụ na-akwado ọrụ 10 ọzọ n'ime obodo, site na ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ụlọ ahịa na-eweta ụlọ oriri na nkwari akụ-nke pụtara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde ọrụ 26 na-akwado ụlọ oriri na ọ atụ areụ dịkwa n'ihe ize ndụ.
Emere nyocha nke ndị okenye 2,200 n'ime Ọgọst 11-12, 2021. N'ime ndị a, mmadụ 1,707, ma ọ bụ 78% nke ndị zara, bụ ndị njem ezumike-ya bụ, ndị gosiri na ha nwere ike ịga njem ezumike na 2021. Nchọpụta ndị dị mkpa n'etiti ndị njem ntụrụndụ na-agụnye ndị a:
69% nwere ike gaa njem ole na ole yana 65% nwere ike gaa obere njem
42% nwere ike ịkagbu atụmatụ njem dị ugbu a na -enweghị atụmatụ ịhazigharị oge ọzọ
55% nwere ike yigharị atụmatụ njem dị adị ruo ụbọchị ọzọ
72% nwere ike gaa naanị ebe ha nwere ike ịnya ụgbọ
70% yikarịrị ka ha ga -eso otu obere
Ebe ikpe COVID-19 na-arị elu na nchegbu njem na-arị elu ka anyị na-abanye n'oge ọdịda na ọnwa oyi, ụlọ ọrụ ụlọ nkwari akụ ahụ nọ n'ọnọdụ dị mkpa. Ọ gwụla ma Congress omume, mbelata njem metụtara ọrịa ga-aga n'ihu na-eyi ndụ nke ọtụtụ narị puku ndị ọrụ ụlọ nkwari egwu egwu. N'ime ihe karịrị otu afọ, ndị ọrụ ụlọ nkwari akụ na ndị nwere obere azụmaahịa n'ofe mba ahụ na -arịọ Congress maka enyemaka oria ojoo. Data a na -egosi ihe mere oge ji ruo Congress ime ihe.
E bipụtara na nso nso a AHLA Nsonaazụ nyocha gosiri na ndị njem achụmnta ego na-agbaghakwa atụmatụ njem ha n'etiti ịrị elu ikpe COVID-19. Nke ahụ gụnyere 67% na -eme atụmatụ ime njem ole na ole, 52% nwere ike ịkagbu atụmatụ njem dị ugbu a na -enweghị nhazi oge ọzọ, yana 60% na -eme atụmatụ ịtụgharị atụmatụ njem dị adị.
Elslọ oriri na ọ areụ seụ bụ naanị akụkụ nke ile ọbịa na ụlọ ọrụ ntụrụndụ na-anatataghị enyemaka ọ bụla n'agbanyeghị na ha so na nsogbu kacha sie ike. Ndị omeiwu US A na-agba ya ume ka ọ gafere iwu nke ọrụ nchekwa ụlọ nkwari akụ nke onye omebe iwu Brian Schatz (D-Hawaii) na onye nnọchiteanya Charlie Crist (D-Fla.). Iwu a ga-enye ndị ọrụ nkwari akụ ndụ, na-enye enyemaka ha chọrọ iji dị ndụ ruo mgbe njem ga-alaghachi na ọkwa ọrịa tupu ọrịa amalite.
September 30, 2021 na 06: 35
Ọ bụrụ na ahụ adịghị gị ma ọ bụ na ahụ adịghị gị, biko nọrọ n'ụlọ. Gwa dọkịta ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Iji belata mgbasa nke coronavirus na Canada, a na -egbochi mmachi njem n'ofe ókèala niile. Zaa ajụjụ ole na ole iji chọpụta.